Hisense 40-inch FHD TV 40B5200PT (Black) ~ ICT.com.mm
HomeHisense 40-inch FHD TV 40B5200PT (Black)
Hisense 40-inch FHD TV 40B5200PT (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ SMART TV Screen Size 40″ Resolution: 1920 x 1080 Display Type: LCD/LED lit Contrast ratio 4000 : 1 Viewing Angle: 178/178 Resolution: 1920 x 1080 USB (2.0):2/... [Learn more]
Display Type: LCD/LED lit
USB (2.0):2/ USB 1, USB 2
Television system (DVB-T/DVB-T2): Yes/Yes
Hisense အမှတ်တံဆိပ် ‘Full HD’ LED TV ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 40” ရှိမှာဖြစ်ပြီး Resolution အနေနဲ့ Full HD (1920 x 1080) resolution ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Natural Color Enhancer နည်းပညာ ပါဝင်တာကြောင့် ပုံရိပ်တွေရဲ့ အရောင်အသွေးကို ပိုမိုစိုပြည်စေမှာဖြစ်ပြီး မိမိနှစ်သက်တဲ့ ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကို အပြင်မှာတကယ်မြင်တွေ့နေရသလို အသေးစိတ် ကြည်လင် တောက်ပတဲ့ Full HD ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနဲ့ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်စေမှာပါ။ မြင်ကွင်းကျယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် တီဗွီရဲ့ဘေးဘက်ကကြည့်ရင်လည်း ရှေ့တည့်တည့်က ကြည့်ရှုနေရသလို ကြည်လင်တောက်ပစွာမြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Set-top Box နဲ့ ဂိမ်းစက်တွေကို ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် HDMI ပေါက် နှစ်ခု ထည့်သွင်းပေးထားပြီး External Hard Drive နဲ့ USB Stick ထဲက ဇာတ်ကားတွေကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုဖို့အတွက် USB ပေါက် နှစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အသံထွက်အားကောင်းတဲ့စပီကာတွေကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး ပြင်ပစပီကာတွေနဲ့ အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ Earphone Jack ပေါက် တစ်ခုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ TV Tuner အတွက် DVB-T နဲ့ DVB-T2 နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်တာကြောင့် MRTV-4, Channel7တို့လို အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းတွေကို အလွယ်တကူ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
Natural Color Enhancer- Providesamore realistic view and together with the overall resolution this makes forapleasurable view experience. Play music and videos stored on your USB is more easy with High Definition resolution. DVB-T2 digital tuner ensures that your TV is able to receive digital signal and you can access all the free to air channels.